Kunyangwe kana PayPal Ikati Kwete Kuva Nehanya, Apple Bhadhara Mari Inogona Kukukanganisa Iwe | IPhone nhau
Apple painopinda mubhizimusi idzva, vazhinji vanotanga kuzunza nheyo, uye nhanho inotevera yeApple neApple Pay haina kuzoonekwa nekambani yanga iri mutongi mukuru wechikamu ichi kwemakore: PayPal. Kubhadhara pakati pevanhu kuchauya kuIOS 11 mukati meMessage application neApple Pay Cash, uye mutungamiri wepamusoro wePayPal ataura nezvazvo.
Mumashoko e CEO wekambani, Apple neApple Pay hazvizove nyore kukwikwidzana navo mukubhadhara pakati pevanhu. PayPal kunyorera kubhadhara pakati pevanhu, Venmo, iri muchinjika-chikuva, nepo Apple Pay ichingowanikwa chete pakati pevanhu vane Apple zvishandiso. Ichi chichava chinogumira chinhu chinoita kuti iwe usabudirire. Nekudaro, iwe unokanganwa zvimwe zvakanakira iwe.
Apple Pay ichiri munzira yekuwedzera, uye muSpain semuenzaniso inowanikwa nenzira shoma neBanco Santander neCarrefour Pass. Asi kana tikatarisa kuVenmo mamiriro acho haasi nani, nekuti anongowanikwa muUnited States, chaizvo apo Apple Pay yakapararira uye uko kune vamwe vashandisi vane madivaysi eIOS uye vanoshandisa iMessage (Meseji). Kune izvi isu tinofanirwa kuwedzera kuti kune dzimwe nyika dzakawanda kunze kweSpain uko Apple Pay iriko mumabhangi mazhinji kupfuura munyika medu.
Chii chinotora kutora Apple Pay Cash? Iva neApple Pay, izvo chete. Kuti ushandise Venmo, zvinodikanwa kunyoresa pawebhusaiti yayo uye kurodha mashandisiro ayo. Kubatanidzwa muhurongwa kunogara kuri mukana wakakura kupfuura dzimwe sarudzo, uye neApple Pay Cash hazvizove zvakasiyana. Iko kugona kwekugona kuzviita kubva kuMessage application pasina mamwe matanho ekuwedzera chichavawo chinhu chekufunga.
Chii chaungashandisa nemari iyoyo? Apple Bhadhara Cash inochengeta mari inogamuchirwa pane yako chaiyo kadhi, iyo inochengetwa muWallet yako. Iyo haizove neyepanyama vhezheni, zvirinani izvozvi, asi unogona kuishandisa kune chero kubhadharwa neApple Pay, zvese mumabhizinesi epanyama uye pamapeji ewebhu uyezve muApp Store. Unogona zvakare kuisa mari iyoyo muaccount yako yebhangi kana uchida. Uye zvese izvi pasina chero komisheni kune vashandisi. Zviripachena kuti minondo yakakwira, asi iyo PayPal inoti haina basa neApple Pay Cash inhema, uye ivo pachavo vanozviziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Kunyangwe kana PayPal ikati usafunganya, Apple Pay Cash inogona kukukanganisa